Vavaka mba hieritreretany ahy. ? Andro sy alina [ary miverina]
Vavaka mba hieritreretana ahy. Miaina miaraka amin'ny filàna mahatsapa tiana sy tiana isika, raha ny marina, ara-dalàna. Ny tahotra ny fandavana dia nitombo bebe kokoa ny filàna ary matetika isika mahita ny tenantsika hitady ny sasany mivavaha ka zahao aho Andro aman'alina, miverena ary miantso ahy.
Toa fepetra hentitra be tokoa izany fa tsy misy zavatra hafa lavitra amin'ny zava-misy.
Ny vavaka no fitaovam-piadiana ara-panahy mahery indrindra antsika, ka tsy tokony hisalasala momba izany isika ary hampiasa azy io isaky ny zavatra ilaintsika, na inona na inona olana mety hitranga.
Ny vavaka dia ho vahaolana foana ary mihatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika.
Misy lova manokana ho an'ny zava-drehetra ary amin'ity tranga manokana ity dia misy ihany koa ny mahomby sy matanjaka noho ny hafa.
1 Ho miasa ve ny vavaka izay eritreretinao momba ahy?
1.1 Vavaka amin'ny Fahafatesana masina hieritreretana ahy
1.2 Ny vavaka ho anao mba mieritreritra ahy amin'izao fotoana izao
1.3 Ny Vavaka mba hitadiavany ahy fatratra
1.4 Vavaka mba hieritreretana ahy ary hiverenany
2 Azoko lazaina ve ny fehezanteny 3?
Ho miasa ve ny vavaka izay eritreretinao momba ahy?
Ny fehezanteny rehetra napetraka ato amin'ity lahatsoratra ity dia nosedraina ary manana fijoroana ho vavolombelona an-jatony ny fahombiazana.
Mahery daholo ry zareo sady manana hery tsy ampoizina.
Raha mivavaka azy ireo am-pinoana lehibe ianao ary raha sahirana, azonao antoka fa hiasa izy ireo.
Andriamanitra sy ny olona masina hafa dia manampy ireo izay tena mila. Raha mila anao dia mangataha fanampiana avy amin'Andriamanitra fotsiny.
Dia hahatonga anao hieritreritra ny tenanao, hitiavanao, hitady ary hamoizam-po, isan'andro, andro aman'alina, amin'ny fotoana rehetra.
Mifototra amin'ny (lazao ny anaran'ny olona) amin'ny fihetseham-poko sy ny vatako, ny fisainan'ny vatako ary ny fanahin'ity olona ity, manatona ahy alina sy andro na inona na inona toe-javatra iainanao.
Mangataka aminao aho, amin'ny anaran'i Santa Muerte Lady dia mangataka anao aho hanome ahy ny hery ary fifehezana tanteraka, mba hananako an'io olona io eo anilako dia mangataka aminao aho mba hikarakara ahy foana, ary aza mitsahatra manatanteraka ireo tombontsoa rehetra angatahiko aminao ireo.
Mandra-pahatonga anao no mangataka anao mba hitondra ahy ho eo anatrehanao. Miantso anao aho, aza ilaozanao aho ary mangataka anao aho mba tsy handaviranao ahy.
Ny fanaovana ny fitiavana ahy dia zavatra sarotra kely.
Izany no antony tokony hivavahantsika amin'ny olona matanjaka ary manana hery be dia be amin'ny fitiavana.
Dadabe i Santa Muerte manao azy
Ny vavaka ho anao mba mieritreritra ahy amin'izao fotoana izao
Manantona anao aho mba hahafahanao manamaivana ny foko sy manasitrana ny ratrako. Ianareo izay teo akaikin'ny avo indrindra ary nanambara ny fitiavana el tontolo Miangavy anao aho mba hifona ho ahy, mangataka fanampiana sy famindram-ponao aho Ry Anjeliko ô!
Ampio aho hampamono ny hanoako ny fitiavana, ampio aho hamorona fatoram-pihetseham-po sy tena izy. Ataovy (lazao ny anaran'ny olon-tiana) manatona ahy amin'ny masom-pitiavana madio.
Henoy ny fangatahan'ny foko ary aza mahafoy ahy amin'ny Arkanjely fitiavana miandry, andrian'ny lanitra.
Ianao izay mendrika ny fitiavana ilay Avo Indrindra, mitadiava fihavanana ao am-poko Fenoy ahy aho amin'ny fahafaham-po miaraka amin'ity olon-droa ity izay niombom-pitia ahy. Fantatro fa ny hatsaram-ponao dia hikasika ny fonao ary hanatona ahy, amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra antsika roa , hanao ny fahagagana ianao.
ny fitiavanao dia infinito Ry arikanjako, mameno ahy ny fahalehibiazanao ary mandrakizay ny fankasitrahako. Kasiho ny fony ary hositraninao eo no ho eo ny ahy.
Ho amiko anie ny hatsaram-panahy ary hiaraka amin'izao tontolo izao ny fitiavanao! Amena!
Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika avy hatrany ny vokatry ny vavaka na dia tsy afaka manamafy izany isika ary izany no zavatra mahery vaika momba an'io vavaka manokana io, izay manasa antsika hino fa vita ny fahagagana na dia tsy hitantsika aza ny valiny.
Misy ny mino fa mivavaha na anontanio miaraka amina finiavana mandrindra ireo faniriana na eritreritra amin'ny olon-kafa dia fihetsika feno fitiavan-tena ao amintsika, fa ny hafa kosa mino fa fihetsika feno fitiavana izany ary misy fomba fijery maro be.
Ohatra, amin'ireo tranga izay nihemotra ny avonavona ary mamela ny olona iray tsy ny sandriny hivezivezy, dia iray amin'ireo vavaka mahery vaika ho an'ny malalako ny hieritreritra ahy ity dia mety ho mahasoa, saingy tsy hoe handratra antsika izany. amin'ny olon-drehetra ary avy eo amin'ny vavaka dia hiezaka hanana blur sy kaonty vaovao isika.
Ny fikasana dia ny hananganana filana fomba iray hitranga, fa tsy hanenjana ny olon-kafa hanapa-kevitra sy hanao izay tiako.
Ny Vavaka mba hitadiavany ahy fatratra
"Tadiavo aho izao, amin'izao fotoana izao (manonona ny anaran'ilay olona ianao) tiako ianao hitady ahy, na aiza na aiza misy anao.
Tompo ô, hatrizao dia mangataka aminao aho (anaran'ny olona) apetrakao amiko fotsiny ny eritreritrao, fa tsy afaka mieritreritra zavatra hafa ankoatry aho fa ny fifantohanao fotsiny dia natokana ho ahy.
Izany no ahalalako fa mila ahy amin'ny fiainanao ianao ary tsy tokony handany andro hafa tsy misy ny fitiavako. Ataovy io fotoana io (anaran'ny olona) manadino ny avonavonao, miantso ahy, hikaroka amiko fatratra ary maniry ny hitoetra eo anilanao mandritra ny andro sisa iainanao.
Amin'ny herin'Andriamanitra, dia miantso ireo anjely telo aho. MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, hany ka nametraka ny tanany (anaran'ny olona) izy ireo ary tsy afaka nihena ny sainy.
Enga anie ny fony, ny vatany, ny fanahiny ary ny fanahiny ao amiko ary irery amiko, fa izy irery ihany no mieritreritra sy maniry ahy, mba hamilivily an'izay rehetra te hanatona azy hanao ratsy.
Amin'ny anaran'i Jesosy, amena. ”
Ny vavaka dia mandaitra ho an'ny filàna rehetra izay mety hananantsika amin'ny maha-olona sy fahatsapana fa tiana hahatongavan'ny famoizam-po, matetika, izay hiezahantsika hianina amin'ny fotoana rehetra.
Mivavaha mba anontanio fa ny olon-kafa, ny mpivady amin'izao fotoana izao, na ny taloha sasany izay nandao ahy tsy ho ela, dia mahatsapa fa mitady antsika dia ny fomba mahasalama indrindra hampahatezitra azy.
Tsara kokoa noho izany izy io mivavaha mba hikaroka io olona io sy hampiseho ny tenantsika amin'ny fandavoana maharary.
Ny vavaka dia afaka mihoatra noho ny teny fotsiny, ny zava-drehetra dia ao amin'ny finoana izay anaovantsika vavaka.
Vavaka mba hieritreretana ahy ary hiverenany
“Amin'ny herin'ny hery lehiben'Andriamanitra, dia mitalaho aminao aho, ry fanahin'ny famoizam-po, toe-tsaina manjaka, tsy manam-paharoa.
Miangavy anao aho mba hanampy ahy hanjaka (anaran'ny olona) ary hifehy ireo sain'izy ireo 5, ka noho io fomba io dia tsy afaka hiala ao an-tsaiko intsony aho.
Miangavy anao aho, mba ho tonga mpitari-dalana anao amin'ity làlana iriko aho ity, ka ny ahy (anaran'ny olona ihany) dia ny ahy ihany, mba hialahanao amin'ireo rehetra maniry hanatona amin'ny finiavana mihoatra ny fisakaizana na izay maniry esory Amiko izy
Miangavy anao aho, mba ho hany tokanao andro aman'alina, mba hitadiavanao ahy sy hiandanako.
Amin'ny anaranao, fanahy lehibe. Amena. ”
Ny fangatahana fanampiana ara-panahy mba hahazoana ny fiverenan'ny olona nandao anay dia fomba fanao izay efa nandritra ny taona maro.
Niantso azy ireo izy la vavaky ny famoizam-po ary mahery noho ny nieritreretanao azy izy io.
Ireo vavaka ireo dia azo atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny antoandro, ny zavatra tokony ho tadidinao dia ny tena tianao.
Satria ny vavaka dia tsy maintsy atao amin'ny hevitra mazava mba tsy hangataka zavatra tsy tena tiantsika loatra.
Azoko lazaina ve ny fehezanteny 3?
Betsaka ny olona tsy mahalala raha afaka mivavaka mihoatra ny iray izy ireo vavaka. Amin'ity tranga ity dia afaka milaza isika eny.
Mivavaha am-bavaka rehetra amin'ny vavaka, fa manaova izany amin'ny andro hafa rehetra.
Aza mivavaka amin'ny vavaka iray ihany amin'ny andro iray ihany.
Miezaha miala amin'ny 1 andro eo anelanelan'ny vavaka tsirairay mba hieritreretana momba ahy sy hanonofy ahy mandritra ny andro sy anio.
Ny finoana no zava-dehibe indrindra amin'ny vavaka rehetra. Raha manam-pinoana ianao ary mivavaka foana mba hino fa ho foana ny zava-drehetra, dia hivaona ny vavaka rehetra.